Dawladda Kenya oo wadda qorshe shir weyne la xiriira ka hortagga burcad-badeedda, bilawga sannaddka cusub ee 2012-ka. – Radio Daljir
Dawladda Kenya oo wadda qorshe shir weyne la xiriira ka hortagga burcad-badeedda, bilawga sannaddka cusub ee 2012-ka.
Nairobi, Dec 10 ? Dawladda Kenya ayaa ku hawlan qorshe ballaaran oo ay ugu diyaargaroobayso sidii ay u qaban lahayd shirweyn la xiriira joojinta iyo ka hortaggidda falalka burcad-badeednimo, kaasoo lagu wado in uu qabsoomo bisha ugu horrsaysa ee sannadka cusub ee 2012-ka.
Shirkaan ayaa lagu wadaa in ay ka qaybgalaan dhammaan waddamada ku-lugta-leh la-dagaallanka burcad-badeeda iyo hay?adaha sida gaar ah ugu dhaq-dhaqaaqa joojinta burcad-badeednimad, taasoo ay qayb ka yihiin maamulka Puntland iyo dawladda dhexe ee federaalka.
La-taliyaha dawladda Kenya ee arrimaha siyaasadda Soomaaliya Ilyaas Barre Shiil, ayaa shalay hadalkaan ka sheegay kulan uu aqalka madaxtooyada Puntland kula yeeshay madaxda dawladda Puntland oo uu ugu horreeyo m/weyne Faroole iyo golayaashii dawladeed, kaddib markii uu halkaasi ku yimid booqasho gaaban.
La-taliyaha, ayaa sheegay dulucda shirkaasi ee la xiriira burcad-badeedda in ay tahay sidii wax looga qaban lahaa burcad-badeedda aafaysay waddamada gobolka oo Kenyana ay ku jirto, taasoo uu sheegay in loo baahan yahay in is-kaashi wadarayn cod iyo cududeedba ay tahay wax lagama maarmaan ah.
Dhinaca kale la-taliyuhu, waxaa uu ka war-bixiyey booqada uu ku yimid Puntland isagooo sheegay Puntland in ay udub-dhaxaad u tahay arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya, loona baahan yahay markasta in la siiyo door lama illaawaan ah, waxaana uu ka mahadceliyey habkii soo dhaweyneed ee Puntland loogu qaabilay.
Imaansha Ergaygaan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maalmo dhawr ah ay inaga xigaan xilliga loo ballamay qabsoomidda wejiga 2-aad ee shirka wadatashiga Soomaalida kaasoo lagu wado in uu Garowe ka furmo 15-ka bishaan December.